Iipopcorn zeHalloween | Imisebenzi yezandla
Molweni nonke! Namhlanje sikuzisa obunye ubugcisa obunxulumene neHalloween, ngeli xesha a uluvo lwendlela yokulungisa iipakeji zepopcorn, kuba ayisiyiyo yonke into ekufuneka ibe mnandi kweli theko. Ezi phakeji zinokugqibelela ukulungiselela ipati encinci ekhaya kunye namalungu osapho okanye ukushiya ebhasikithini emnyango wendlu ukuze abantu babathathe kwaye bonwabele ipati kancinci ukuba bacinge ngeemeko esikuzo.
1 Izinto esiza kuzidinga ukwenza iphakheji yethu ye-popcorn yeHalloween
Izinto esiza kuzidinga ukwenza iphakheji yethu ye-popcorn yeHalloween
Ukugoba, intambo, iribhoni okanye into yokubopha iphakheji
Isiphawuli esimnyama esimnyama
Okokuqala kukho konke yenza iipapa, singaya sizenza kancinci kancinci njengoko sisenza iiphakeji kwaye sibone ukuba zingaphi esiza kuzifuna. Ukwenza i-popcorn ihlale iphantsi kweliso lomntu omdala njengoko inokutshisa umphunga.
Siza kusika isikwere sephepha elisekuhleni Inkulu ngokwaneleyo ukuba ibe nephakheji encinci enkulu kunesandla sethu.
Sibeka i-popcorn embindini wepakeji kwaye songe amacala amabini ukufumana uxande.
Songa uxande kwisiqingatha, Ukuqinisekisa ukuba iipopcorn zisasazwe kakuhle kwaye ngaxeshanye ukuba iziphelo azikhululekanga iipopcorn ukuze zikwazi ukuvala iphakheji.
Siyavala iphakheji ukuzisa iziphelo zephepha kunye nokulijika kancinci ukuze liqiniswe kwaye likwazi ukubopha iribhoni.
Ekugqibeleni siya kuthi uhombise iphakheji ngokupeyinta ubuso, Sinokwenza ubuso besoyikiso, ithanga okanye nantoni na ethi qatha engqondweni ukuba nje kulula ukupeyinta. Nanku umzekelo:
Kwaye ulungile! Sele zilungile iiphakheji zethu zepopcorn.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Izihlandlo ezikhethekileyo » Imisebenzi yeHalloween » Iipopcorn zeHalloween
Ngokukhawuleza kwaye kulula umkhusane wokubamba